क्रिसमस पार्टीमा मलाइकाले लगाइन् यो ज्याकेट, मुल्य कति हो ? « News24 : Premium News Channel
क्रिसमस पार्टीमा मलाइकाले लगाइन् यो ज्याकेट, मुल्य कति हो ?
एजेन्सी । डान्सर मलाइका आरोडा जहिल्यै पनि आफ्नो फशेनलाई लिएर चर्चामा आउने गर्दछन् । भर्खरै मात्र पनि मलाइका र उनकी बहिनी अमृता आरोडासँग मिलेर आफ्नो आमालाई घर बाहिर स्पट गरेका थिए, अर्थात, मलाइकाले आफ्नो पूरै परिवारसँग क्रिसमस सेलिब्रेट गरेकी छन् ।
यसै क्रिसमस सेलिब्रेशनको मौकामा मलाइकाको लुकको चर्चा हुन पुग्यो । मलाइकाले लगाएकी रातो ज्याकेट र हिल्सले राम्रो चर्चा पायो । यस लुकमा मलाइका निकै स्टनिङ देखिइन् । तर मलाइकाले यस ज्याकेटलाई कतिमा खरिद गरिन् त ?
इन्टरटेन्मेन्ट पोर्टलका अनुसार मलाइकाले गुच्चि (न्गअअष्) ब्राण्डको ज्याकेट लगाएकी थिइन् । यस ज्याकेटको अनलाइन मूल्य ३२१० क्यानेडियन डलर रहेको छ । यो ज्याकेटको मूल्य नेपाली रुपैयाँ २ लाख ७२ हजार पर्न जान्छ ।
हिल्सको कुरा गर्नुपर्दा मलाइकाले नेपाली १ लाख ४४ हजार बराबर मूल्यको लगाएकी छन् । मलाइकाको यस लुकलाई हिल्सले कम्प्लिट गरेको छ ।
पछिल्लो समय मलाइका अरोडा अभिनेता अर्जुन कपूरसँगको अफेयरलाई लिएर निकै चर्चामा छन् । विगतका दिनहरुमा मलाइका र अर्जुन सँगै देखिदै आएका छन् । गत बुधबार पनि यो जोडीले सँगै डिनरमा रमाइलो गरिरहेका थिए ।
एजेन्सी । सलमान खानको ‘द फाइनल ट्रुथ’ हलमा चलिरहदा दर्शक तथा प्रशसकहरुले अतिबाजी गरेका छन्